Luqadda jirka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma tahay xiriir wanaagsan? Waxaan kula xiriirayna oo keliya waxaan dhahno ama qorno, laakiin waxaan sidoo kale u adeegsannaa calaamado aan siinno miyir ama miyir-qaba. Luqadda jirkeenu waxay la xiriirtaa dadka kale waxayna u dirtaa macluumaad dheeri ah erayga fudud ee lagu hadlo. Tusaale ahaan, qof kaqeyb gala wareysiga wuxuu u sheegi karaa loo shaqeeyahaaga inuu yahay mid aad u dagan, laakiin gacmahooda xoqan iyo kufsiga kursiga ay ku wareejinayaan wax kale. Hal qof ayaa iska dhigi kara inuu xiiseynayo waxa qof kale dhahayo, laakiin indho la’aantooda indho la’aanta ah ayaa khiyaanay ciyaarta. Waxa xiiso leh, rasuul Bawlos wuxuu sharraxayaa in midkeen kasta uu ka tirsan yahay jidhka Masiixa: "Laakiin idinku waxaad tihiin jidhka Masiixa qof walbana waa xubin" (1 Korintos 12,27).
Su’aasha ayaa soo baxeysa: Waa maxay luqadda jirka ee aad ku hadasho sida xubin ka mid ah jidhka Masiixa? Waxaad dhihi kartaa ama qori kartaa waxyaabo badan oo wanaagsan, wanaag ah, iyo waxyaabo dhiirrigelin leh, laakiin waa habka aad u dhaqanto ayaa wax badan ka sheegaya. Sida aad u qaabeeyso noloshaada waxay u hadleysaa cod dheer oo cadeyneysaa waxa aad qiyamka iyo waxa aad rumeysantahay ay yihiin. Dabeecadahaagu waxay gudbinayaan farriinta dhabta ah ee aad u keentid dadka kale ee aadanaha ah.
Ma waxaan nahay diirimaad, saaxiibtinimo, iyo qaabilaadda dadka kale shaqsi ahaan, kaniisad maxalli ah ama kaniisad? Mise waxaan nafteena nahay oo waalan oo aan si adag u aragnaa qof ka baxsan kooxdeena yar? Dabeecadeena ayaa ku hadasha oo xiriir la leh adduunka daawashada. Erayadayada jacaylka, aqbalaadda, qadarinta iyo lahaanshaha waa lagu joojin karaa raadkooda haddii luqadda jirkeennu diido.
"Maxaa yeelay, sida jidhku u badan yahay oo uu weli xubno badan leeyahay, laakiin xubnaha oo dhan in kastoo ay badan yihiin, jidh qudha ayay yihiin, Masiixuna waa sidaas oo kale. Maxaa yeelay, dhammaanteen waxaa laydinku baabtiisay isku jidh qudha, inaynu nahay Yuhuud ama Gariig, ama addoommo ama kuwa xor ah, oo kulligeenna isku jidh baannu ku wada dhex jirnaa. Sababta oo ah jirku maahan hal xiriir, laakiin qaar badan » (1 Korintos 12,12: 14).
Waxaan rabnaa inaan qirano in luqadda jirkeenu ay tahay inay ixtiraamto dhammaan aadanaha kale. Haddii aan muujino habka jacaylka weyn, waxay garowsan doonaan inaan runtii nahay xerta Masiixa maxaa yeelay isagu wuu ina jeclaaday oo nafsaddiisa ayuu na siiyey. Ciise wuxuu yiri: «Waxaan idin siinayaa amar cusub: inaad isjeclaataan. Sidaan idiin jeclaaday, waa inaad isjeclaataan. Tani waxay dadka oo dhan u sheegi doontaa inaad xertayda tihiin, haddii aad jacayl idin siisaan (Yooxanaa 13,34-35). In kasta oo jacaylka Masiixu loo gudbiyo dadka kale sida caadiga ah xaaladaha oo dhan, luqadda jidhkeenna ayaa xoojisa waxaan nidhaahno. Taasi waa wada xiriir wax ku ool ah.
Erayada ayaa si fudud uga soo baxa afkaaga si fudud wayna u jaban yihiin haddaan lagu taageerin ficilladaada iyo habdhaqanka jacaylkaaga. Markaad la xiriirayso, ha noqoto erayga hadal ama qoraal ama qaab aad ku nooshahay, dadku waxay ku arki karaan jacaylka Ciise ee kugu jira. Jacayl is cafiya, aqbala, buka oo bogsada qof walba. Waxaanay tani u noqon kartaa luqadda jirkaaga wada sheekaysiga aad haysatid.